Abathengi Bokunaka: Ukuthengisa Kuthola Ukubuyekezwa Okungaphezulu Kokudlela ku-Yelp | Martech Zone
Uyezwa TripAdvisor, ucabanga kanjalo amahhotela. Uyezwa Ama-Healthgrade, ucabanga kanjalo odokotela. Uyezwa Yelp, futhi amathuba mahle ukuthi ucabanga zokudla. Kungakho nje kumangaza abanikazi bamabhizinisi abaningi basendaweni nabakhangisi ukuthi bafunde Izibalo zikaYelp uqobo okusho ukuthi, ezibuyekezweni zabathengi eziyizigidi eziyi-115 ama-Yelpers ashiye selokhu kwethulwa, Ama-22% ahlobene nokuthenga vs. I-18% ephathelene nezindawo zokudlela. Idumela lokuthengisa-ke, lenza ingxenye evelele yokuqukethwe yiYelp, kukhombisa amabhizinisi ezitini nodaka ukuthi ukugcina ubukhona beYelp kuyimfuno yendawo yokuthengisa.
Isibonelo esingahleliwe sangempela: hlola izitolo ezisezingeni eliphakeme zeYelp ezisezingeni eliphezulu eSan Francisco Bay Area. Inani elikhulu lokubuyekezwa ezinye izitolo elizitholile liyamangalisa. Sibona ama-Discount Builders Supply (250), iLowe's Home Improvement (427), iCole Hardware (297) neCliff's Variety (461). Lokhu kuhlanganiswa kwemikhiqizo emikhulu nabathengisi abazimele kugqamisa inani lokubuyekezwa cishe noma yiliphi ibhizinisi elingathanda ukulithola, inqobo nje uma liqukethe imizwa emihle.
Kepha nakhu okubanjiwe: Imihlahlandlela yokubuyekezwa kweYelp ingeminye yemithetho eqine kunazo zonke emhlabeni wokubuyekezwa kwabathengi, ukuvimbela ngqo izinkampani ekuceleni ngqo abathengi ukubuyekezwa. Ngakho-ke ibhizinisi lokuthengisa lingaqhudelana kanjani neYelp kanti futhi lihambisana nemikhombandlela? Nawa amathiphu ama-5 wokukusiza wenze lokho kanye.
1. Gwema Izinsizakusebenza Ezilahlayo
Kubalulekile ukuqonda ukuthi uma ibhizinisi lakho linquma ukungayinaki imihlahlandlela ye-Yelp bese liqala ukucela wonke amakhasimende ukuthi akubuyekeze ku-Yelp, izimbuyiselo zakho ekutshalweni kwemizamo kungenzeka zingabi usizo. Ukucela noma ngubani ukuthi akubuyekeze ongeyona i-Yelper esunguliwe enezibuyekezo ezi-5 ezilinganiselwe kuzoholela ekutheni impendulo yabo ihlungwe. Futhi, iphethini yama-akhawunti womsebenzisi amasha sha ashiya ukubuyekezwa kwebhizinisi lakho ingaphakamisa amafulegi abomvu nesiqhwaga sokubuyekeza.
Sikhumbula lokhu engqondweni, futhi sikubona lokho I-Yelp ihlaze esidlangalaleni abaphula imihlahlandlela esikhathini esedlule, ukugwema umthengi ongenamqondo ocela ukubuyekezwa kwe-Yelp kuzovikela izinsizakusebenza zakho (futhi mhlawumbe nedumela lakho), kukukhulule ukuzama ezinye izindlela.
2. Yamukela Izenzo Ezinhle Kakhulu
Ucwaningo lwabathengi olwenziwe yingxenyekazi yokuphathwa kokubuyekezwa i-GatherUp luthole lokho ngokuphelele Ukubuyekezwa okungu-25% kuvela kokuhlangenwe nakho okuhlukile kwamakhasimende. Lesi sibalo sikhombisa ngokuqinile ukuthi enye yezindlela ezinhle zokukhuthaza abasebenzisi be-Yelp abasunguliwe ukuthi babuyekeze ibhizinisi lakho ngaphandle kokucelwa ukuthi badlule okulindelwe ngesikhathi senkonzo. Uma ufunda ngezibuyekezo zemikhiqizo edumile ye-Yelp, uzothola izehlakalo zokubhala ze-Yelpers ezibakhuthazayo: umabhalane owagijimela endaweni yokupaka ukuletha into ekhohliwe, umthengisi onikeze ulwazi oluqotho esikhundleni sokuthengisa kanzima, ibhizinisi bazokuthokozisa ngenjabulo noma iyiphi into abangakabi nayo.
Kungaba yinto elula njengenhlonipho eyengeziwe noma emangalisa njengento enkulu ethi 'wow' umthengi angayilindelanga ezobashayela ku-Yelp ukuthi basebenzise isikhathi sabo samahhala ngokuzithandela behlanganyela injabulo yabo. Uma ibhizinisi lakho lidinga ukubuyekezwa okwengeziwe kwe-Yelp, hlola izinqubomgomo nezinhlelo zesevisi yamakhasimende ukuze ubone ukuthi ungaziguqula yini izindlela ezingekho emthethweni zibe yimpumelelo emikhulu.
3. Yiba nguMalusi oNobuhlakani
'Isimo somhlambi' akusona isichasiso esincomekayo ukubamba abathengi noma ababuyekezi, kepha bekuyindlela ejwayelekile yokubheka kwengqondo yomuntu kusukela ngekhulu le-19 ukuthi ontanga banethonya ekuziphatheni kwabantu. Enye indlela elula yokuqondisa ama-Yelpers asungulwe ukuze akushiyele isibuyekezo (ngaphandle kokubuza) ukubakhombisa ukuthi abanye banakho. Izindlela ezilandelayo zokuphakanyiswa kobukhona bakho be-Yelp zibe kuvunywe ngokusobala yibo:
Gqamisa ukubuyekezwa kwakho okuhle kakhulu kwe-Yelp, inqobo nje uma ucele imvume yababuyekezi yokwenza njalo.
Qiniseka ukuthi usebenzisa Ilogo ye-Yelp evunyelwe ngokwenza njalo, ngaphandle kokukuguqula noma ukukuhlanekezela.
Qiniseka ukuthi unikeza isibuyekezo kuYelper osibhalile, futhi ungaguquli ulimi lwabo noma isilinganiso sabo.
Ungasebenzisa futhi Iwijethi kaYelp uqobo ukufaka ngqo izibuyekezo kuwebhusayithi yakho.
Uma ibhizinisi lakho lifaneleka, ungathola ukunamathela kwewindi le- 'People Love Us On Yelp'.
Cela i-'Sithole ku-Yelp '
Ngokufana nokusetshenziswa okugunyaziwe kuwebhusayithi yakho, ungafaka ukubuyekeza, okungashintshiwe kweYelp ezintweni zokuphrinta zangokwezifiso. Isibonelo, ungafuna imvume yakwa-Yelper ukufaka isibuyekezo sabo kumaphosta asesitolo, amabhanela, izincwajana, amaflaya nezinye izimpahla.
Zonke izindlela ezingenhla zifuna ukuthuthukisa ukuqwashiswa kwabasebenzisi be-Yelp ukuthi abanye babuyekeza ibhizinisi ngenkuthalo. Ubalusa ngobumnene kodwa ngekhono kuze kube seqophelweni lokuguqulwa lapho benquma khona ukweqa emkhakheni wezingqinamba bese bengeza ukubuyekeza kwabo.
4. Yenza i-Yelp Ingxoxo Yezindlela Ezimbili
Kungasabisa ngokwethembeka ukubhekana neqiniso lokuthi umphakathi womthengi unengxoxo eqhubekayo mayelana nomkhiqizo wakho kuzingxenyekazi ezinkulu zokubuyekeza ezinjengeYelp. Ukwesaba izibuyekezo kuyisimo sangempela futhi esisemthethweni sokuphathwa kwedumela lesimanje, kepha ukukhathazeka (kanye nemiphumela yebhizinisi) kungashintshwa kakhulu ngokusetshenziswa okuhle komsebenzi wokuphendula umnikazi amapulatifomu amaningi ahlinzekayo. Lesi sici senza umnikazi aphendule kuzo zonke izibuyekezo, futhi kuningi osekubhaliwe ngamandla ale fomu lokumaketha ukuhlehlisa ngokuphelele izimo ezingezinhle. Kushiwo okuncane ngamandla wezimpendulo zabanikazi omuhle ukubuyekeza ukukhombisa ukubonga nokukhuthaza ukuzibandakanya okuqhubekayo.
Njengoba kunikezwe ukuthi ukubuyekezwa okuhle kwe-Yelp kungamakhasimende wokuqukethwe wokuzithandela akwenzela ibhizinisi lakho, akulungile kuphela ukubonga ababuyekezi - futhi kuyindlela enhle kakhulu yokufakazela abanye base-Yelpers ukuthi ubazisa kangakanani abaphathi bakho. Umnikazi webhizinisi othatha isikhathi ukubhala kafushane kodwa Isiko Impendulo ezwakalisa ukubonga kwangempela ikhomba kubo bonke abanye abathengi abangaba khona ukuthi isikhathi sabo namazwi amahle bazobaluleka. Ukubonga okuqinisekisiwe okuvela ebhizinisini kusebenza njengesikhuthazo esingeziwe sokulibuyekeza. Ubani ongakujabuleli ukwaziswa?
Khumbula futhi ukuthi ama-elite Yelpers asebenza kakhulu ku-Yelp - akujabulela kakhulu ukubhala lapho. Bathumele isignali enhle, nobukhona bempendulo yomnikazi wakho osebenzayo, ukuthi ninokuzilibazisa kweYelp enifana ngakho.
5. Yisho Ngomlomo, Ngokuqonda Kwakho
Leli thiphu lifanele kakhulu amabhizinisi amancane endawo akha ubudlelwano bangempela namakhasimende abo. Emkhakheni wokuthenga, lokhu kungabandakanya izitolo ezidayisa izincwadi, izitolo zezingubo, izitolo zezipho, izitendi zasepulazini, izitolo ezizimele noma izitolo zehadiwe, noma amabhizinisi anikezela abantu abahlukile njengabaculi, abaculi noma abasubathi - ukubala nje abambalwa.
Uma wena, noma abasebenzi bakho abasezingeni eliphakeme, abathembekile bakha ubudlelwano namakhasimende ajwayelekile, asikho isizathu sokuthi kungani ungakwazi ukukhuluma nabo mathupha nge-Yelp ngesikhathi esingajahile. Uma uthola ukuthi yi-Yelper esebenzayo, akukho okukuvimbela uxoxe ngokuthi kunjani ukuba ngumnikazi webhizinisi uzama ukusebenza ngaphakathi kwemihlahlandlela ye-Yelp yokungalokothi ubuze ngqo ukubuyekezwa. Iphuzu lalokhu akukhona ukukhohlisa imizwa yekhasimende - iphuzu ukuthi kube nokuxoxisana ngezindlela ezimbili ngendima ebalulekile yedumela lebhizinisi emphakathini owabelana nawo. Ngabe ikhasimende lakho licabangani ngenqubomgomo? Ucabangani ngayo? Uma ikhasimende linikele ebhizinisini lakho, ingxoxo enjengale ingabakhuthaza ukuthi benze ingxenye yabo ukugcina iminyango yakho ivulekile ukuze baqhubeke nokujabulela iminikelo yakho.
Inqubomgomo ye-Yelp isuselwa ekuzinikeleni kwabo ebuqothweni. Bafuna ukubuyekezwa kungachemi, ukuqinisekisa ukuthi bayasebenziseka kubo bonke abathengi. Lokhu kunengqondo impela - akekho ofuna ukwakha umbono wamanga osuselwa kuzibuyekezo ezingekho emthethweni noma ezishukumisayo.
Abathengisi bendawo, okwamanje, bayazi ukuthi kufanele bancintisane ukuze baphile ngenkathi bephila ngezindinganiso zabo eziyisisekelo zokwethembeka nokulunga. Le ndatshana inikeze ngamathiphu wokuzuza emandleni amakhulu kaYelp ukushayela imali ngendlela yenkampani yakho, ngaphandle kokusebenzisa kabi ipulatifomu. Ngaphandle kwalokhu, kuze ku-Yelp, kubathengi ababasebenzelayo, nakumabhizinisi abamba iqhaza ukuqhubeka nokuhlola ukuthi yini eyenza inqubomgomo ilungele wonke umuntu. Ukubheka wonke amaqembu, yingxoxo edinga ukuqhubeka.
Awuqinisekile ukuthi kuthiwani ngebhizinisi lakho ku-Yelp kwasekuqaleni? Noma ukhungathekile futhi ungaqiniseki ukuthi uzoqala kuphi? IMoz Local maduzane izokwazi ukukusiza ufune futhi uphathe ubukhona beYelp yebhizinisi lakho futhi iphendule kuzibuyekezo ezihambisana nezici zokuphathwa kosesho lwendawo ezinamandla ngaphakathi kwepulatifomu yazo.
Qala Isivivinyo Sakho Samahhala Namuhla!
Tags: ehlukahlukene ewenicole hardwareukunikezwa kwabakhi besaphuleloibhulogi yobunjiniyelaThola Us On YelpHlanganisaUpIGetFiveStarsezempiloukucabanga komhlambiwendawoibhizinisi lendawoukubonakala kwendawouhlelo lokubonakala kwendawolowe'sUkuthuthukiswa Kwasekhaya Lowemozmoz yendawozokudlaIzibuyekezoi-San FranciscoTripAdvisorukuzidelaYelpibhulogi ye-yelpinqubomgomo yelpukwesekwa kwe-yelpimihlahlandlela yelpyelpers
I-athikili enhle kakhulu, kepha nginombuzo. Wena uthi:
"Gqamisa ukubuyekezwa kwakho okuhle kwe-Yelp, inqobo nje uma ucele imvume yababuyekezi yokwenza lokho."
Kungani udinga imvume uma ukubuyekeza kuthunyelwe esidlangalaleni?
Siyabonga ngokubuza umbuzo omuhle. Kuyisidingo sikaYelp uqobo ukuthi wenze lokhu, ngakunye kwama-athikili engixhumanise nawo kusuka kulesi siqephu. Ukuqagela kwami ​​ukuthi indlela uYelp abona ngayo ukuthi umbuyekezi uvumile ukuthi amagama abo abekwe obala ku-Yelp nasezinhlelweni i-Yelp ezisabalalisa kuzo - abavumanga ukuthi amagama abo abekwe obala kuwebhusayithi yenkampani yomuntu wesithathu. Ngakho-ke, ngimane nje ngidlula izidingo zikaYelp lapha, kepha njengoba ngishilo, ngicabanga ukuthi kunesidingo sokuthi i-Yelp iqhubeke nokuhlola nabaninimabhizinisi ukuthi yini eyenza inqubomgomo ilunge. Ngiyethemba ukuthi lokhu kuyasiza!